Page 24 – Shwe Yaung Lan
[ January 27, 2021 ] တကယ့်သက်ရှိပုံစံအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော သစ်သီးသစ်နှံ ပုံသဏ္ဍာန်များ	SYL Amazing Photos
[ January 27, 2021 ] အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ် သနပ်ခါးသည်အဘွားက ကားလာဌားလို့ လိုက်ပို့ပေးလိုက်ရသောအခါ	Knowledge
[ January 27, 2021 ] ဒေါက်တာဦးကျော်ကျော် အရေပြားအထူးကု ဆရာ၀န်ကြီး ရေးထားတဲ့ ရေချိုးခန်းထဲက လူသတ်သမား	Knowledge
[ January 27, 2021 ] အိမ်ထောင်သက်ကြာလာတဲ့အခါ အမျိုးသမီးတချို့သူတို့ခင်ပွန်းကိုမုန်းသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းများ	Knowledge
[ January 26, 2021 ] ဆန်ထဲမှာ အာဆင်းနစ်အဆိပ်တွေ ပါလာခြင်း အကြောင်းအရင်းနှင့် ဘာဗီတာမင်မှ မပါတဲ့ မြန်မာဆန်	Knowledge
ခြိမ့်ကေကို တရားစွဲခံရတဲ့ ကိစ္စမှာ ခြိမ့်ကေကိုဘက်က ဝင်ရောက် ရပ်တည်ပေးလာတဲ့ အောင်ရဲလင်း
January 8, 2021 Writer Magic 0
ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားသူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး အောင်ရဲလင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်ဆန်ဆန်ဖက်ရှင်လေးတွေကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တတ်တာကြောင့်လည်း မိန်းကလေးပရိသတ်တွေက ကြွေနေကြတာပါ။ အနုပညာကိစ္စကလွဲရင် ကျန်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ဝင်မပါတတ်တဲ့ အောင်ရဲလင်းဟာ ယမန်နေ့ကတော့ ကိုဗစ်ဥပဒေနဲ့ တရားစွဲခံခဲ့ရတဲ့ ခြိမ့်ကေကိုဘက်က ဝင်ရောက်ရပ်တည်အားပေးလာခဲ့တာပါ အောင်ရဲလင်းက “Stay Strong Fella!#KeepYourHeadsHigh #ChaintKKo” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ FB မှာ […]
မြန်မာအိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးနောက်ပိုင်း မျက်ရစ်နဲ့ နှာခေါင်းကိုခွဲစိတ်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ပရိသတ်ကို ချပြလာတဲ့ ထက်အဉ္စလီ
January 7, 2021 Writer Magic 0
Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ထက်အဉ္စလီကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းကိုရရှိထားသူတစ်ဦးပါ ယခုရက်ပိုင်းမှာတော့ ပြိုင်ပွဲပြီးနောက် သူမ Surgery လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပရိသတ်တွေအတွက် တင်လာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ထက်အဉ္စလီက“ ဆာဂျရီ လုပ်ဖို့ဘာတွေလိုလဲ !!!!!! ထက် ဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲ? DR KYI CHAN KO ဆီမှာလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထက်ရဲ့ နှာခေါင်းနဲ့မျက်ရစ်ခွဲစိတ်မှုအတွေ့အကြုံလေးတွေကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ထက်ရဲ့ Surgery Vlog လေးကို […]
သမီးဖြစ်သူ The Voice သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ အပေါ် သူ့ရဲ့ အမြင်ကို ပြောပြလာတဲ့ ဒေါ်သက်သက်ခိုင်
G( ခေါ် ) သက်ရတနာကျော်ဝင်း ဟာ The Voice Myanmar (Season 3) Blind Auditions သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ “It Will Rain” သီချင်းနဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကြား လူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် သူမဟာ The Voice Myanmar ပြိုင်ပွဲမှာ အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပေမယ့် သူမရဲ့ ရိုးသားမှုနဲ့ ပရဟိတစိတ်ဓာတ်ကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ယခုရက်ပိုင်းမီဒီယာတွေ့ဆုံမှု တစ်ခုမှာတော့ သူမရဲ့မိခင် ဒေါက်တာဒေါ်သက်သက်ခိုင်က သမီးဖြစ်သူ […]
မိန်းခလေးတိုင်းကိုချစ်တတ်ပေမယ့် သူမရွံမုန်းမိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဘေဘီမောင်
ပရိသတ်ကြီးရေ.. သရုပ်ဆောင်ကောင်းပြီး စကားပြောလည်းပွင့်လင်းကာ ဆွဲဆောင်မှုတွေအပြည့်နဲ့ ချစ်စရာလည်းကောင်းတဲ့ ပြည်သူချစ်တဲ့သရုပ်ဆောင်အနုပညာရှင် မင်းသမီးချောလေးကတော့ ဘေဘီမောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ဘေဘီလေးကတော့ ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့အောက်မြင်နေသလို အဆိုတော်ချောလေးသားဂန်းနဲ့အတူ ကြည်နူးပျော်စရာအချသ်ရေးလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေကာ စီးပွားရေးဘက်မှာလည်း တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်နော်..။ ယနေ့မှာတော့ ဘေဘီမောင်က မိတ်ဆွေကောင်းလို့ထင်ပြီးပတ်သက်ခဲ့ပေမယ့် ကြောက်စရာကောင်းပြီး အောက်တန်းကျတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ကြုံခဲ့ရကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် သူမကတော့ ” ဘဝမှာ မိတ်ဆွေကောင်းလို့ထင်ပတ်သတ်ခဲ့ပေမယ့်ကြောက်စရာကောင်းပြီး အောက်တန်းကျတဲ့ ရွှံစရာမတစ်ယောက်နဲ့ကြုံဖူးခဲ့ပြီဘဝမှာမိန်းခလေးတိုင်းကိုချစ်တတ်ပေမယ် အဲ့ဒီမိန်းမကိုတော့ ရွှံမုန်းပါရှင့် “ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာမျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ဘေဘီမောင်ကတော့ သူမရွံမုန်းမိတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အကြောင်း […]
ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာမိန်းကလေးကိုလက်ထပ်ယူခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေများစွာခံနေရတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲဲ့ သရုပ်ဆောင် ဘုန်းလျှံ
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဘုန်းလျှံကတော့ အနုပညာလောကထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ချစ်ရတဲ့မိန်းကလေးနဲ့လည်း နှစ်ကိုယ်တူဘဝလေးကို တည်ဆောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းလျှံက မင်းသားချောခန့်စည်သူတို့နဲ့အတူ လုပ်အားဒါန၊ငွေကြေးဒါနပါဝင်ပြီး အလှူအတန်းတွေလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘုန်းလျှံတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်က ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလေးဖြစ်တဲ့ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းကိုလည်း တွင်ကျယ်အောင် ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း ဘုန်းလျှံရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာမိန်းကလေးကိုလက်ထပ်ယူခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေများစွာခံနေရကြောင်းရင်ဖွင့်ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းလျှံက “အင်တာဗျူးမှာ.မီးလို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေလိုက်မိပါရေ.ကျွန်တော်ကို့.အမြဲတမ်းနှောက်ယှက်နီကတ်စွာကိုတယောက်လဲမသိကတ်ပါ..အားနီလို့အားအားယားယားဖြေနိစွာလဲမဟုတ်ပါ..ရခိုင်တိုင်းကိုလဲရည်ရွယ်ပြောဆိုနိစွာလဲမဟုတ်ရပါ… နှောက်ယှက်နီကတ်တေလူတိကိုရည်ရွယ်ရစွာပါ.​ကျွန်တော်ပြောစွာမှာမိုက်ရိုင်းဆဲဆိုစွာတခုလဲမပါ..ပါ.အားအားယားယားပြသာနာကိုကြီးအောင်မလုပ်စွာကောင်းကတ်ပါဖို့…ကျွန်တော်ဇာဖြစ်လို့နှောက်ယှက်တေလူတိကိုပြောရလဲဆိုကေ.. 1…ကျွန်တော်.online မှာစျေးရောင်းရေ..အော်ဒါမမှာပဲဖုန်းဆက်ပနာအကိုမယားဇာလူမျိုးလဲ.ဇာဖြစ်လို့ယူလဲ.အမြဲတမ်းဖုန်းဆက်ပနာနှောက်ယှက်တေ. 2..fb CB မှာ.အကိုရခိုင်မဟုတ်ပါလား.ဦးနှောက်မရှိပါလား..အကို့မယားကိုဇာဖြစ်လို့ယူလဲ.. 3.fb.comments မှာရီးကတ်တေ..မွေးရစွာဝမ်းရီဆာရေလတ်..သူမွေးစွာလား.ကျွန်တော့အမိမွေးစွာလား..ရခိုင်ကိုလာကေ..လိုက်သတ်ဖို့.လာဝံ့ကေလာလတ်..ကိုယ့်မွေးရပ်မြေကို.လာဖို့စွာတောင်လာလို့မရဗျယ်လားပြောကတ်ပါဦး 3.fb.comments တိမှာထပ်ရီးကတ်တေ..ထောင်ထဲဝင်ခါ.ပြန်လွတ်ဖို့ဆုတောင်းပီးကတ်တေ..ကျေးဇူးတင်ပါရေ..ပြန်ထွက်လာရေခါ ဗမာမကိုယူပြီးကေ.ကျေးဇူးဆပ်စွာလားတဲ့..ဆုတောင်းပီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါရေ..ယေကေလဲ့..ဆုတောင်းတိုင်းနေ့ချင်းညချင်းလွတ်လာစွာတော့မဟုတ်.ကိုယ့်ပြစ်ဒဏ်ကို.ကျေအောင်.7 နှစ် နဲ့.3 လ ပီးဆပ်ပြီးထွက်လာစွာပါ… လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာနဲ့လွတ်စွာကလဲ.ဘုန်းလျှံ မို့.လွတ်စွာမဟုတ်..ပြစ်ဒဏ်ကို.4ပုံ.3 ပုံပီးဆပ်ပြီးလို့.လွတ်စွာပါ.ယေကလဲ့ဆုတောင်းပီးကတ်စွာကိုကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြုပါရေ..ယောချင့်ကို.ထောင်ထဲမှာပဲနီဖို့ကောင်းပါရေလတ်.ပြေကတ်စွာ…အဓိပ္ပါယ်မရှိရေစကားတိကိုပြောပီးကေ.မနှောက်ချက်ကတ်ပါကေ့..ကျွန်တော့မယားကိုကျွန်တော်ချစ်လို့ယူရေ.ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းရဖို့စွာ.ကျွန်တော်ရှာကျွေးရပါဖို့စွာယာ.ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာ.အမြဲတမ်းမပြတ်လာတွေ့စွာ.ကျွန်တော့အဖေ..အမေ.နဲ့.ဗမာသူငယ်ချင်း ထိန်ဝင်းနောင်ပါ. အခုဘဝတခုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရပ်တည်ပြီးကေလျှောက်နီစွာမှာ.အကောင်းမွန်ဆုံးယာအားပီးစီချင်ပါရေ..ဘဝမှာလူ့ငရဲမှာလဲအကြာကြီးနီပြီဗျယ်.အခုပိုင်ဆဲနီစွာလောက်ကို.တခုလေ့မဖြစ်.ယေကေလေ.အမျိုးရို့.အမှန်တရားကိုသိအောင်.ပြောပြရဖို့.မဟုတ်ကေ.အထင်လွဲဖို့..ပြောနီ.နှောက်ယှက်နီကတ်တေလူတိလဲ.FB မှာအချိန်ကုန်..သူများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖို့အစား.ကိုယ့်မိသားစု.စားဝတ်နီရေး.ကျန်းမာရေး.အရေးကြီးရေကိစ္စတိကိုရာစိတ်ဝင်စားစီချင်ပါရေ..ဘဝကိုအကောင်းဆုံးအဓိပ္ပါယ်ရှိရှိရပ်တည်ချင်ပါရေ….သူများလားနီရေလမ်းကြောင်းမှာ.ထမ်းမဖို့ကေတောင်မှ.ဖြုတ်မချစီချင်ပါ..အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရေ…ဘုန်းလျှံ ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ဘုန်းလျှံကတော့ ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာမိန်းကလေးကိုလက်ထပ်ယူခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေများစွာခံနေရတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီးရဲ့အမြင်ကိုလည်း ပြောခဲ့ကြပါအုန်းနော် Writer – Magic(Shwe Yaung Myanmar) […]
Live မှာဖင်လှန်ပြလို့ အမေဆူတာခံရတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မိုးအောင်ရင်
ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားသူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး မိုးအောင်ရင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်ဆန်ဆန်ဖက်ရှင်လေးတွေကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တတ်တာကြောင့်လည်း မိန်းကလေးပရိသတ်တွေက ကြွေနေကြတာပါ။ မိုးအောင်ရင်ဟာ လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ မရှိသေးတာကြောင့် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်ကိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုရက်ပိုင်းမီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာတော့ မိုးအောင်ရင်က Live မှာဖင်လှန်ပြလို့ အမေဆူခံရတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မိုးအောင်ရင်က ” “Live မှာ ဖင်လှန်ပြခဲ့မိလို့ အမေက […]
ရေထဲမှာခက်ခက်ခဲခဲရိုက်ခဲ့ရတဲ့ ရိုက်ကွင်းဟာသတွေစုစည်းထားတဲ့ Video လေးကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
January 6, 2021 Writer Magic 0
အနုပညာလောကရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဖြူဖြူထွေးက ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာ အားတက်သရော ပါဝင်လုပ်ကိုင်လေ့ရှိသူဖြစ်ပြီး စိတ်သဘောထားဖြူစင်တဲ့ သူလေးပါ။ သူမရဲ့ ရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့ အပြောအဆိုလေးတွေကြောင့် အများက အချစ်ပိုကာ အားပေးနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ ဖြူဖြူထွေးက ပရိသတ်တွေသိချင်နေကြတဲ့ ရေထဲမှာခက်ခက်ခဲခဲရိုက်ခဲ့ရတဲ့ ရိုက်ကွင်းဟာသတွေစုစည်းထားတဲ့ Video လေးကို ထုတ်ပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီ Video လေးထဲမှာ​တော့ ဖြူဖြူထွေးက ရေထဲမှာခက်ခက်ခဲခဲရိုက်ခဲ့ရတဲ့ ရိုက်ကွင်းဟာသတွေစုစည်းထားခဲ့တာကြောင့် လူကြည့်များနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် Covid car […]
ချစ်သူရဲ့မွေးနေ့ မှာ နောက်ဆုံးပေါ် ပစ္စည်းအသစ်စက်စက်ကြီးတစ်ခု လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို အဆိုတော်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ နန်းဆုရတီစိုးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ဆယ်စုနှစ်တစ်စုကျော်တိုင် အောင်မြင်မှုရရှိနေသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း နန်းဆုရတီစိုးတစ်ယောက် ဘယ်လိုအသက်အရွယ်မျိုးပဲရောက်ရောက် အရင်ကအတိုင်း အချစ်မလျော့ပဲ အားပေးနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး နန်းဆုရတီစိုးကလည်း သူမကိုအားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ စိတ်ပျက်သွားခြင်းမရှိအောင် အနုပညာအလုပ်တွေကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုပြီး ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လာလျက်ရှိပါတယ်..။ ယနေ့မှာတော့ နန်းဆုရတီစိုးက သူမရဲ့ချစ်သူကောင်လေးအတွက် နောက်ဆုံးပေါ် PlayStation5ဂိမ်းစက်ကြီးကိုဝယ်ပေးပြီး အမှတ်တရမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးဖြစ်တဲ့အကြောင်း သူမရဲ့ […]
ပရိသတ်တွေဝမ်းသာစေမယ့်သတင်းလေးကို ပြောပြလာတဲ့ လူရွှင်တော်ကြီး ဦး ငြိမ်းချမ်း
ဟာသလူရွှင်တော်ဖြစ်ရုံသာမကဘဲ သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ပါ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ ရပ်တည်လျက် ရှိနေသူကတော့ လူရွှင်တော် ငြိမ်းချမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးမှုတွေကို များစွာရရှိထားသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးငြိမ်းချမ်းဟာ မကြာသေးတဲ့ လပိုင်းအချိန်လောက်က လေဖြန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီကနေ့ နံနက်မှာတော့ သက်သာသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလာခဲ့ပါတယ်။ ” လေဖြန်းသွားတဲ့ လူရွှင်တော် ဦးငြိမ်းချမ်း ပြန်ကောင်းသွားပီဗျာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပရဟိတအလုပ်တွေပြန်လုပ်ရန်အသင့်ပါ ၊ ဦးငြိမ်းချမ်း ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းသွားပါပြီ အနုပညာလုပ်ငန်းများနှင့် ပရဟိတအလုပ်များပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန်အသင့်ပါ ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ဝါရင့်လူရွှင်တော်ကြီး ဦးငြိမ်းချမ်းရဲ့ ကောင်းသတင်းဖြစ်တာကြောင့် ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ သိရှိစေဖို့အတွက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်……။ Writer – […]
Wave Money ဖုန်းနံပါတ်အတုနဲ့ သူ့ထံမှ ငွေ လိမ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်း အများသိအောင်ပြောပြလာခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော်ဒိန်းဒေါင်
ဟာသလူရွှင်တော်ဖြစ်ရုံသာမကဘဲ သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ပါ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ ရပ်တည်လျက် ရှိနေသူကတော့ သရုပ်ဆောင် ဒိန်းဒေါင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးမှုတွေကို များစွာရရှိထားသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဒိန်းဟာပရဟိတအလုပ်တွေကိုလည်း အားတက်သရောလုပ်လွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေပါ လက်ဖျားခါချီးကျူးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဒိန်းဒေါင်က သူ့ကို Wavemoney. call Center ဖုန်းနံပါတ်အတုနဲ့ လာလိမ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြလာခဲ့တာပါ ဒါကတော့ Wave Money အယောင်ဆောင်ပြီး ဆုငွေ ၁၀ သိန်း ရရှိတယ်လို့ပြောကာ သူရဲ့ မှတ်ပုံတင်ကို တောင်းနေခဲ့တာကြောင့် မယုံလို့ ဖုန်းဆက်မေးကာမှ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြန်ဖြေလို့ အတော်လေး ဒေါသထွက်နေခဲ့တာပါ။ ဒိန်းဒေါင်ကလည်း သူရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာထက်မှာ […]